#Madagascar : Antohomadinika: Nodimandry teny an-dalana ilay lehilahy | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Antohomadinika: Nodimandry teny an-dalana ilay lehilahy
Raim-pianakaviana iray tombanana ho 60 taona, no namoy ny ainy tao anaty fiara fitateram-bahoaka, zotra mampitohy ny renivohitra amin’ i Mahitsy omaly antoandro tokony ho tamin’ ny mitatao vovonana.
Niainga avy any Mahitsy ity raim-pianakaviana ity ary teo Antohomadinika no tsy nahatsiaro tena tampoka raha ny fanazavan’ ny nanatri-maso. Efa teo amin’ ny toeran’ ny fiantsonan’ io zotra avy eny Mahitsy io anefa ny tenany vao tsikaritry ny maro fa maty. Raha ny nambaran’ ny mpanampy ny mpamilin’ io fiara fitaterana io dia mpiloka any Mahitsy ity raim-pianakaviana ity. Tsy nahatsikaritra soritr’ aretina teny aminy nandritra ny fotoana niaingana hihazo ny renivohitra fa toa ny mpandeha rehetra ihany. Teny an-dalana dia nanomboka nilofika izy nefa noheverin’ ny maro fa natory ka tsy taitra ny niray fiarakodia taminy. Nony niala anefa ny rehetra tetsy amin’ ny toerana fiantsonan’ ny zotra mampitohy an’ i Mahitsy sy ny renivohitra etsy Antohomadinika vao taitra ny maro satria tsy nihetsika intsony ity raim-pianakaviana ity. Tsy nisy anefa ny fandraisana andraikitra nataon’ ny tomponandraikitr’ilay fiara nandehanany fa samy tsy nisy sahy nikitika io raim-pianakaviana io izy ireo.
Minitra vitsy taorian’ ny tamin’ ny mitatao vovonana, ora nahatongavanay mpanao gazety teny an-toerana no tonga ny polisim-pirenena avy eo Antohomadinika ary izy ireo no nitondra ny razana any amin’ ny hopitaly.
Manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny tomponandraikitr’ilay fiara dia nilaza ny soso-keviny ny mponina iray izay onena nahita ity raim-pianakaviana ity tsy nihetsika intsony.
Izao tranga izao moa dia mahatonga ny maro hametraka fanontaniana hoe aiza ho aiza ny fandraisan’ andraikitry ny mpitatitra manoloana ny voina mahazo ireo olona entiny? Mbola tokony homena fiofanana ihany koa ve ny mpitatitra eto amintsika momba izay famonjena olona izay?